Mashruucii biyo fidinta Xunboweyne ee fashilmay xaguu ku danbeeyey? lacagta la lunsaday ayaa ka badan $165million dollar | ToggaHerer
← Daawo: ” Dakhligii aanu soo ururinay oo Gobolaysan, demaysan halkan ayaanu keenaynaa Anagu Tuug Ma nihin oo dunidaanu la wadaagaynaa” Wasiirka horumarinta Maaliyada
WANAAGA DADKEENA IYO MADAXDEENA MA DHUGANAA Ahmed Diriye →
9- Markii sedexaad dhawaan midowga yurub (EU ) markuu ka yaabay mashruucan aan dhamaaneyn wuxuu ku yaboohay lacag dhan $15 Million in ay ku baxayso dhameystirka biyo fidinta mashruuca xunbo weyne si Caasimadu ay mar uun biyo ku filan uhesho.
1- Kut’e mashruuca 1aad ee magaciisa la yidhaa (HUWSUP ) waxay EU ku maalgelisay lacag dhan $15 million Euro ah. Waxaa sanduuqa horumarinta ee SDF isna mashruucan ku maalgelisay lacag dhan $11 million dollar waxaana mashruucaa fulintiisa loo xil saartay markii la kala shakiyey hayadaUN Habitat waxaana shaqada mashruucaa si aan loo musuqmaasuqin dusha ka ilaalinaaya Shirkad Jarmal ah oo la yidhaa (FITCHNER ) hadaba shacabka reer Somaliland waxay is weydiinayaa meesha uu mashruucani ku danbeeyey ? Mise wuxuu isna noqday aan ka fuudee alow fiihaa … !!
2- Lay’e mashuuca 2aad oo isna Hargeisa Gudaheeda ka socda waxaa lacag gaadhaysa23,500,000 Million oo Euro ku bixiyey Banka Horumarinta Dawlada Jarmalka waxaana shaqada mashuruucan gancanta ku haya shirkad Jarmal oo la yidhaahdo CES? Hadaba su’aashu waxay tahay xaguu marayaa mashruucaasi? oo isna mudadiisii dhaafay ? Goorma ayaa Hargeysi biyo ka helaysaa ?
3- Kuy’e Shirkada Coca Cola international waxay iyana ku deeqday biyo balaadhinta lacag dhan $5 Million oo dollar waxaana ay gacanta u gelisay shirkad Talyaani ah oo la yidhaaTS shirkadaa oo magaalada dhexdeeda kawada taangiyo dhaadheer? ilaa iyo maanta ummadda uma cada meesha ay howshaasi marayso iyo goobta iyo goorta ay biyo ka heli doonaan reer Hargeysa.
5- Mashruuca 2-aad ee Biyo balaadhinta Caasimada Hargiesa wuxuu ahaa Mashruuca ka socda Geed-deebleh iyo Hori-haatley. Waxaa mashruucan ku midoobay World Bank, German Bank, SDF, EU iyo Shirkada Coca-Colla. waxaana mashruucan lagu maalgeliyey lacag dhan $79 Million dollar. mashruucan waxaa hawshiisa wada hayada UN-habitat waxaana ay aheyd in uu mashruucani uu isna dhamaado Bisha Janaayo ee sanadkan 2018ilaa iyo hadana muu dhamaan xukuumaduna kama ay jawaabin mashaariicdan hantida badani ku baxday halkii ay ku danbeeyeen iyo cida lunsatay lacagihii loo qoondeeyey ee lagu dhameystiri lahaa.